Xariiqdii wakhtiga: Fadeexaddii IT-ga ee hayadda hoggaanka gaadiidka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xariiqdii wakhtiga: Fadeexaddii IT-ga ee hayadda hoggaanka gaadiidka
Published måndag 28 augusti 2017 kl 14.18
Qandaraas qalinka lagu duugey
Hayadda hoggaanka gaadiidka ayaa dibadda qandaraas ku bixisay diiwaanka gawaarida iyo laysannada. Horay waxaa howlahaa u hayay Wakaaladda gaadiidka. Hase yeeshee waxaa iminka qandaraas lagula galey shirkadda IBM isla-markaana dabadeed la wareegtay howlaha IT-ga ee hayadda hoggaanka gaadiidka.
Sharciga oo laga weecday
Agaasimaha guud ee wakaaladda gaadiidka, Maria Ågren, ayaa go’aamisay in shuruucda laga weecdo. Xeerka sugidda, xeerka xogta shakhsiga iyo xeerka furnaanka xogta iyo sirta.
Laanta dul-socodka oo digniin bixisay
Ka tallaabsashada shuruucda qaarkood ayaa looga wada hadley dhexdeeda hayadda hoggaanka gaadiidka. 23-kii juun ayay laanta dul-socodku digniin ka gaarsiisay hoggaanka hayadda howlihii qandaraaska. Xilligii kuleeylaha ee isla waagaasi ayay hayadda nabad-sugidu baaris middaa ka biloowday.
Säpo ayaa ku talisay in la joojiyo
Ciidanka nabad-sugidda Säpö wuxuu ku talo bixiyay in si degdeg ah loo joojiyo qandaraaska dibadda, hase yeeshee bishii diseembar ayay shirkadda IBM la wareegtay howlihii.
Waxaa la bilaabay baaris
Waxaa baaris lagu bilaabay agaasimaha guud ee hayadda hoggaanka gaadiidka Maria Ågren. Waxaa lagu tuhunsanaa dhowris darro xog sir.
Agaasimihii guud oo howsha laga eryey
Agaasimihii guud ee hayadda hoggaanka gaadiidka Maria Ågren ayaa ku khasbanaatay inay shaqada ka tagto. Lama caddeeyn sabata ay shaqada uga tageeyso.
28 JUUN 2017
Ågren oo ganaax lagu ridey
Maria Ågren ayaa ogolaatay go’aanka in ganaax lagu rido. Wuxuu agaasimihii hore ee hayadda hoggaanka gaadiidku qirtay dembi iyo inay bixiso ganaax gaarsii-san 70 000 kronor.
Saxaafadda ayaa heshay akhbaarta
War-geeyska DN ayaa shaaciyay in Maria Ågren ay qiratay fal dembiyeed la xiriira hab maamuuskii xogta aaladaha kombiyuutarrada. Ganaax lagu riday ayey u sabab ahaayeen dacwooyinka ”taxadar la’aan culus” oo bannaanka la soo dhigay xog sir ahayd. Sida ku cad go’aanka xeer-ilaaliyaha wuxuu dembigani ka dhacay Sweden intii u dhexeeysay 30-kii sebteembar 2015 iyo 31 maarso 2016. Markiiba waxaa bilowday iney si is-daba joog ah dibadda ugu soo baxaan xogihii sirta ahaa ee la dayacey. Kolkii ay hayaddu qandaraaska IT-ga ku wareejisay shirkadda IBM waxey waddammo dhaca bariga Yurub gacanta ku dhigeen sal-dhigii xogta kaydka ee hayadda hoggaanka gaadiidka. Shaqaaluhu maahayn mid la soo hubiyey. Sal-dhigga xogta hayadda hoggaanka gaadiidka ayey ku keeydsanaayeen xog ey ka mid yihiin dhammaan gaadiidka dalka, xitaa kuwa ciidanka ammaanka iyo milateriga.
14 LUULYO 2017 Fadeexooyin hor leh iyo casilaado hor leh
Waxaa soo shaac baxday inuu hoggaamiyaha hoggaanka hayadda gaadiidka Rolf Annerberg ka war hayay dhacdooyinka xeer burinta. Hase yeeshee aannu wax tallaabooyin ah ka qaadin. Akhbaaraha ey dhici kartay in la heley ayey ka mid ahaayeen war-bixinno la xiriira gawaarida baadi-goobka loogu jiro iyo qariidooyinka gaadiidka lagu qaado alaabooyinka qiimaha ku fadhiya. Sida uu qoray war-geeyska oo dul mar ku sameeyay baaristii uu sameeyay ciidanka nabad-sugiddu. Waxaa ka mid ahaa sirar badan ee shirkado iyo sidoo kale xog la xiriirta kaabiyeyaasha dalka. Tusaale ahaan gawaarida waaweyn ee waddooyinka, buundooyinka ama garoommada dayuurraduhu xamili karaan. Waxaa sidoo kale ka mid ahaa xogtii la dayacay in la heli karey dadyoow ey xogtoodu sir ahayd. Kolkii middaasi dhacday dabadeed ayaa mar kale xogtooda lagu soo ban-dhigey mail furan oo loo diray shirkadda.
15 LUULYO 2017
Wasiirro laga dacweeyey KU
Mikael Oscarsson (KD) ayaa dacwad uga gudbiyay guddi hoosaadka dastuurka wasiiraddii kaabiyeyaasha dhaqaale Anna Johansson (S). Iyada oo laba maalmood dabadeed dacwad laga gudbiyay madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven.
Wasiirka oo eedda saaray hayadda hoggaanka gaadiidka
Wasiiradda kaabiyeyaasha dhaqaale Anna Johansson (S) ayaa shaaca ka qaaday inuu hoggaamiyaha hoggaanka hayadda Rolf Annerberg shaqada joojiyay. Sidoo kale dhowr ka mid ah xubnaha hoggaanka hayadda ee ka war hayey ku tumashada sharciga ee hayadda ayaa la bedeli doonaa. Johansson ayaa sheegtay in dawladdu war-bixinta hayadda hoggaanka gaadiidka ay soo gaartay xilligii gu’ga ee 2016. Markaasina oo ay dawladdu go’aansatay inay hayaddu howshii kaga aadanayd ay gudatay, sidaa daraadeed ay dawladdu aanay tallaabo kale qaadin, hase yeeshee masuuliyaddii dusha laga saaray hayadda hoggaanka gaadiidka.
Madaxa dawladda oo ka hadlay
Wasiirka difaaca ayaa sannad ogsoonaa
Wasiirka difaaca Peter Hultqvist ayaa sheegay inuu ogsoonaa caqabadaha hayadda hoggaanka gaadiidka laga soo bilaabo maarso 2016.
Madaxa dawladda oo dib laga ogeeysiiyay
Madaxa dawladda Stefan Löfven ayaa sheegay inay akhbaarta soo gaartay jannaayo 2017. Löfven ayaa ula jeeday in is dhaafsiga war-bixinnadu uu yahay dhaqan sooyaal ah hayadaha dhexdooda.
Guddi-hoosaadka baarlamanka oo qabtay su’aalo weydiin
Wasiirka difaaca Peter Hultqvist ayaa sheegay intii aanu hor tegin guddi-hoosaadka difaaca in kolkii uu akhbaartan helay uu hubsaday in tallaabooyinkii loo baahnaa laga qaadey. Wasiirka arrimmaha gudaha Anders Ygeman waxaa su’aalo la yeeshay guddi-hoosaadka dastuurka. Ygeman ayaa aamin-san inuu qabtay tallaabooyin wanaagsan kolkii akhbaartu soo gaartay.
Alliansen-ka oo soo jeediyay in 3 wasiir shaqada laga fariisiyo
Garabka midig ee Alliansen ayaa ku baaqay inuu soo jeediyo kalsooni kala noqosho wasiirrada difaaca, arrimmaha gudaha iyo kaabiyeyaasha dhaqaale, middaasina oo sabab looga dhigey habkii loo maareeyey fadeexaddii IT-ga ee hayadda hoggaanka bulshada.
27 LUULYO 2017
Löfven oo dawladdiisa isku shaandheeyay
Anders Ygeman iyo Anna Johansson ayaa xilkii iskaga degey, hase yeeshee uu Peter Hultkvist howshiisii ku nagaaday. "Wuxuu leeyahay taageero ballaaran, masuulna kama aanu ahayn dhacdadii, sida uu sheegay Löfven. Morgan Johansson waxaa loo dhiibay arrimmaha gudaha Tomas Eneroth waxaa loo magacaabau wasiirka kaabiyeyaasha dhaqaale. Helene Fritzon waxaa loo magacaabay wasiirka socdaalka iyo ku xigeenka wasiirka cadaaladda. Wasiirka caafimaadka Gabriel Wikström ayaa caafimaad darro howsha isaga casilay, xilkiisiina ay la wareegtay wasiirka bulshada Annika Strandhäll.
KU ayaa horay u soo dhigtay xilligii baaristeeda
Waxaa caddaatay in guddi-hoosaadka baarlamanka ee dastuurku uu soo dedejiyay baaristii fadeexaddii IT-ga ee hayadda hoggaanka gaadiidka iyo sida ay dawladdu u maareeysay, sida laga soo xigtay Ekot oo wareeysiyo la yeelatay af-hayeennada xisbiyada. Andreas Norlén M, ahna guddoomiyaha guddi-hoosaadka baarlamanka ee dastuurka, ayaa doonaya in howsha baarista la bilaabo in lagu guda jiro xilliga kuleeylaha. –Halista ammaanku waa xaalad wayn oo muhiimad ku fadhida, waxayna noqon doontaa howl aad u ballaaran, sidaa daraadeed ayay u wanaag-sanaan lahayd in aannu horey u bilowno
KU OO Säpo ka codsatay qoraallo
Guddi-hoosaadka baarlamanka iyo guddi-hoosaadka difaaca ayaa qabtay shirar degdeg ah oo cusub. -Ma jirto cid ugu yeertay go’aan dawladeed, sida uu sheegay xog-hayeha wasiirka difaaca oo ka jawaabayay su’aashii guddi-hoosaadka dastuurka ee la xiriirtay xiriirka xog-hayeha madaxa dawladda. KU ayaa go’aamisay inay qayb ka qaadato qoraallada baaritaannadii ciidanka nabad-sugidda ee Säpos iyo in madaxtooyadu su’aalo dhowr ah ka jawaabto.
Xog-hayehii Löfven oo shaqada ka fariisatay
Gacantii midig ee madaxa dawladda, xog-haye Emma Lennartsson ayaa shaqada si lama filaan degdeg ah isaga casishay, sida uu qoray war-geeyska DN iyadoona war-geeyska u sheegtay inay gashay khaladaad. Waxay sheegtay inay ahayd inay garawsato halista war-bixinnadii laba jeer ka soo gaaray ciidanka nabad-sugidda fadeexaddii IT-ga ee hayadda hoggaanka gaadiidka oo ka horeeyeen labaduba kulank ay horay u sheegtay.